आज फागुन १६ गतेको राशिफल - Muldhar Post
Tuesday April 13, 2021 |
दैनिक राशिफल २०७७, १६ फाल्गुन आईतवार 126 पटक हेरिएको
आज मिति २०७७ साल फागुन महिनाको १६ गते आइतबार । मेष-धेर खाने र उच्च क्यालोरी भएको आहार नगर्नु उचित हुन्छ। तपाईंको उट्पट्याङ्गको व्यवहार भए तापनि तपाईंको जोडीले सहयोग गरिरहनेछ। तपाईं एक पटक आफ्नो जीवनको प्रेम भेटेपछि, अरू केही आवश्यक पर्ने छैन। तपाईंले आज यो सत्यको महसुस गर्नुहुनेछ। आफ्नो जोडीसँग आज आफ्नो जीवनको सबैभन्दा रोमान्टिक दिन हुन गइरहेको छ।
वृष-तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। अध्ययन नगरेर बाहिरी गतिविधिहरुमा भाग लिनाले आफ्ना आमाबाबुका क्रोधको सामना गर्नु पर्छ। क्यारियरको योजना बनाउनु खेल झैं महत्त्वपूर्ण छ। आमाबाबुलाई खुसी पार्न दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नु राम्रो हुन्छ। आज सहजताको कमीले गर्दा तपाईँ आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निस्सासिएको महसुस गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंले राम्रो बातचीत गर्नु चाहिं आवश्यक छ।
मिथुन-इच्छा शक्तिको कमीले तपाईंलाई भावनात्मक र मनोवृत्तिको सिकार बनाउन सक्छ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। अचानक भएको रोमान्टिक तर्कले तपाईंलाई भ्रममा पार्न सक्नेछ। आजको दिन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा अरूलाई बुझाउन उत्सुक नहुनुहोस्। तपाईंको जोडी आज धेरै रोमान्टिक देखिन्छन्। कर्कट- संकटको समयमा विशेष गरी आफ्नो धैर्य नगुमाउनुहोस्। आफ्नो परिवारका साथ गरेको सामाजिक गतिविधिले सबैलाई तनाउमुक्त र सुखद मुडमा राख्ने थियो। तपाईंकी प्रेमीकाको नराम्रो व्यवहारले आज रोमान्समा बाधा पर्नेछ। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई गलत हो भन्नाले पूरा दिन विरक्तलाग्दो हुन सक्छ।
शिंह-आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नुहोस्। आजको दिन नजिकका आफन्त वा साथीहरूले राम्रो समाचार दिएबाट सुरु हुनेछ। तपाईंको साहसले प्रेमलाई जीत्नेछ। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ। कन्या-रक्तचाप विरामीहरुले खासगरी आफ्नो स्वास्थ्यको अतिरिक्त ध्यान राख्नुपर्छ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। कसैको लागि नयाँ रोमान्स निश्चित देखिन्छ – आफ्नो प्रेमले तपाईंको जीवन फूलाउनेछ। तपाईंले आज आफ्नो विवाह यति सुन्दर कहिल्यै भएको थिएन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। कन्याको लागि सामान्य रुपमा भन्ने हो भने आज मध्यम खालको समय रहेको पाइन्छ ।
तुला-आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। छिमेकीसँग झगडा गर्नाले तपाईंको मुड बिग्रिन सक्छ। तर आफ्नो स्वभाव नबिगार्नुहोस किनभने यसले मात्रै आगोमा इन्धन थप्ने काम गर्दछ। तपाईंले सहयोग दिनु भएन भने तपाईंसँग कसैले झगडा गर्न सक्ने छैन। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो प्रेमीको एउटा नयाँ अद्भुत पक्ष देख्न पाउनु हुनेछ। तपाईं वरिपरि मानिसहरूले तपाईंको सम्बन्धमा मतभेद सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने धेरै सम्भावना छ। बाहिरी मान्छको सल्लाह अनुसार केही नगर्नुहोस्।
वृश्चिक-आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंले बच्चाहरुसँग केहि समय बिताउनुपर्छ र तिनीहरूलाई मूल्यमान्यता सिकाउनु र तिनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीको ज्ञान दिनु आवश्यक छ। काम बाँकी भए तापनि रोमान्स र सामाजिकताले तपाईंको मनलाई शासन गर्नेछन्। आफ्नो जोडीले तपाईंलाई केही नराम्रा कुराहरूका साथै तपाईंको किशोर समयको याद दिलाउने छन्।
धनु -मनोरञ्जन र आनन्दको दिन। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। आफ्नी पत्नीसँग वनभोजमा जान धेरै राम्रो दिन। यसले आफ्नो मुड परिवर्तन मात्र होइन आफ्नो गलतफहमी मेटाउन पनि मद्दत गर्नेछ। प्रेमी जीवन थोरै कठिन हुन सक्छ। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंको जोडी आज धेरै आत्म केन्द्रित हुन सक्छन्। मकर-आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। विगतका लगानीबाट आयमा वृद्धि हुने देखिन्छ। एउटा पुरानो सम्पर्कले तपाईंलाई केही समस्यामा पार्न सक्छ। विगतका रमाइला सम्झनाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछ। वैवाहिक जीवनको एउटा कठिन चरण पछि, तपाईंले आज रमाइलो दिन पाउनु हुनेछ।
कुम्भ -डरको डरलाग्दो राक्षससँग लड्न आफ्नो विचारमा केही सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं यो कट्टर भूतको निष्क्रिय र बेरहमी सिकार बन्नुहुनेछ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। मोमबत्तीको उज्यालोमा प्रियसँग खाना खानुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
मीन-तपाईंको व्यक्तिगत समस्याले मानसिक आनन्द बर्बाद गर्न सक्छ तर आफैलाई यी दबाबबाट बचाउनको लागि रोचक कुराहरू पढेर केही मानसिक व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको उट्पट्याङ्गको व्यवहार भए तापनि तपाईंको जोडीले सहयोग गरिरहनेछ। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।